Filoha sinoa Xi Jinping : Nisaotra manokana ny Filoha malagasy -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha sinoa Xi Jinping : Nisaotra manokana ny Filoha malagasy
06/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Noraisin’ny Filohan’ny Repoblika entim-bahoakan’i Sina, Xi Jinping, manokana tao amin’ny Grand Palais tao Beijing ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, omaly.
Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny Filoha sinoa ny hafaliany tamin’ny nandraisan’i Madagasikara sy ny Filoham-pirenena malagasy anjara tamin’ilay Fihaonambe ara-toekarena sino-afrika na Focac, andiany fahatelo. Noho izany, nisaotra manokana ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny Filoha Xi Jinping.
Ankoatra izay, niray feo ny roa tonta fa ny fiarahan’ny sino-malagasy dia tonga eo amin’ny tantara tsara indrindra, ary mampiseho ny heriny sy ny fomba fijery mitovy.
Nambaran’ny Filoha Xi Jinping tamin’izany fa nampiseho ny fanohanany hatrany an’i Madagasikara i Sina. Nanao ezaka amin’ny fanohanana amin’ny fametrahana ny fahamarinan-toeran’ny firenena ary ny fampandrosoana ara-toekarena manaraka ny fepetra takiana nasionaly. Notsindrian’ity laharana voalohany any Sina ity fa manohana an’i Madagasikara i Sina amin’ny alalan’ny fizakan-tena amin’ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra…
Eo amin’ny fiaraha-miasa, dia anisan’ny firenena mitana ny lohany amin’izany sy eo amin’ny tontolon’ny varotra eto Madagasikara i Sina. Porofon’izany ny mbola nahazoantsika fifanarahana amin’ny fanarenana ny lalamby amin’ny Fianarantsoa Côte-Est (FCE) sy ny fanitarana ny seranam-piaramanidina ao Toamasina. Tsy vitan’izay ihany fa teo ihany koa ny fanamboarana ny lalamby mampitohy an’Antananarivo amin’i Fianarantsoa ary ny tetikasa “Smart City”. Izany tetikasam-piaraha-miasa rehetra izany dia nosoniavina tany Beijing, Sina, avokoa tao anatin’ilay fihaonana tamin’ireo mpandraharaha tany an-toerana.
Araka izany, vonona ny hitondra fampandrosoana maharitra ary hanokatra lalam-baovao ho an’i Madagasikara ny Filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny alalan’ny fitadiavana sy fanelanelanana amin’ireo mpamatsy vola sy ireo orinasa vahiny goavana.
Eny am-pelatanan’ny HCC ny baolina taorian’iny famoahana voka-pifidianana vonjy maika nihazakazahan’ny CENI fatratra iny. Voaporofo ary tsy azon’iza lavina intsony anefa ny hosoka faobe nanerana ny Nosy nandritra iny fihodinana faharoa iny… Maika hangatsiaka Nanampin-tsofina ...Tohiny
Dina ara-pitondran-tenan’ireo kandidà : Tsy misy mihaino ny CFM